Global Voices teny Malagasy » Ny voka-dratsy nateraky ny tondra-drano tao Thailandy · Global Voices teny Malagasy » Print
Ny voka-dratsy nateraky ny tondra-drano tao Thailandy
Voadika ny 17 Novambra 2011 13:26 GMT 1	 · Mpanoratra Mong Palatino Nandika imanoela fifaliana
Sokajy: Azia Atsinanana, Thailandy, Mediam-bahoaka, Voina
Nihoatra ny 500 ny maty  tamin'ny tondra-drano nahatsiravina tao Thailandy tao anatin'ny 50 taona. Nilaza  ny mpitondra fanjakana fa mbola mijaly noho ny tondra-drano ny faritra 25. Fianakaviana maherin'ny iray tapitrisa no voakasika amin'izany ary nandripaka tany fambolena teo amin'ny 4,4 tapitrisa hekitara teo amin'ny firenena io tondra-drano io.
Nilaza ny governoran'i Bangkok fa faritra miisa 470 tao an-tanàna no voakasiky ny tondra-drano ary faritra maro no nahazo baiko hoe hifindra toerana . Hita etsy ambany ny saritany  maneho ny faritra tratran'ny tondra-drano ao Bangkok:
Nanoratra mikasika ny fiantraikan'ny tondra-drano teo amin'ny fiangonan'ny Boddhista sy teo amin'ny moanina i Suthichai Yoon :
Miezaka mafy ireo moanina Boddhista tato ho ato eo amin'ny fanolorana fanampiana amin'ny fiadiana amin'ny tondra-drano izay miha-miakatra hatrany. Fiangonana an-jatony no dobon'ny tondra-drano ary moanina’ any amin'ny faritra lavidavitra dia mijaly nohon'ny tsy fahampian'ny sakafo isan'andro satria ireo mponina ao an-toerana dia tsy afaka namita ny anjara adidiny isan'andro eo amin'ny fiantrana ireo moanina taorian'ny tondra-drano izay nahazo ny faritra maro.
Namoaka sary vitsivitsy maneho ny tondra-drano ny blaogy The Thailand Life :
Nanapa-kevitra ny hitondra ny fakantsariko aho androany hariva mba ahitana mazava tsara hoe inona no tena mianjady amin’ ny mponina Sutthisan. Toa hita hoe feno rano ny arabe, nefa mbola azo iafiana aloha izany hatramin'izao raha oharina amin'ny any an-tanandehibe. Izay aloha ny amin'iny, fa ny sisin-dalana sasantsasany dia efa dibo-drano tanteraka, araka ny fahitantsika azy eto.
Nalaina tao amin'ny blaogy The Thailand Life
Manao tatitra i Ladprao 64  hoe tsy dia nisy fiovana loatra ny any amin'ny faritra voatondra-drano:
Raha ny fijerinay, dia tsy nisy fiovana loatra androany. Ireo faritra niharan'ny voina ireo dia mbola iharany hatrany, na dia efa niitatra tsikelikely aza izy ireo. Toa ohatran'ny tsy dia nihetsika firy aloha ny haavon'ny rano amin'iny lalana mankany amin'ny Ladprao iny, na dia efa nilaza aza aho teo aloha hoe efa mihamidina any ambanin'ny tany ny haavon-drano.
Voalaza fa mbola ambany hatramin'izao ny haavon'ny rano any amin’ ny faritra somary mianavaratra izay tratran'io tondra-drano io, anisan'izany i Pathum Thani, ary voatatitra fa hiverina amin'ny laoniny ny fiainana ankapobeny ao anatin'ny folo andro, na dia vinavina fotsiny aza izany. Fa ho hitantsika eny ihany ny fivadihan'ny toe-javatra
Misy horonan-tsarimihetsika  izay maneho ny fandehanan'ny bisikileta ao anatin'ny tondra-drano etsy ambany:
Manakiana ny ezaka fanampian'ny governemanta i @ThanongK, mpikambana ao amin'ny Twitter:
@ThanongK : Ireo olona manana fari-piainana eo amin'ny antonony ihany no mahazo vaovao mikasika ny tondra-drano amin'ny alalan'ny aterineto. Ny vahoaka sasany dia tsy mahalala ny zava-miseho.
@ThanongK : 6. Tsy fantatry ny governemanta hoe iza amin'ireo faritra ireo no voalohan-daharana tokony arovana amin'ny tondra-drano. Mifantoka amin'ny fanampiana ny indostria ny governemanta fa tsy amin'ny fanampiana ny vahoaka.
@ThanongK : 7. Ny hany mba asa ataon'ny governemanta dia ny famindrana ny vahoaka ao aminy any amin'ny faritra hafa nefa mety andalovan'ny tondra-drano ihany koa.
Namorona  horonan-tsary mihetsika iray ilay mpitoraka blaogy Broneana, mangataka fanohanana bebe kokoa ho an'ireo tra-boina vokatry ny tondra-drano. Etsy ambany dia misy sarina  salotr'ain'i judnak (asa aman'andraikitra lehibe) izay noforonona mba anehoana ny olana ara-pahasalamana  eny amin'ny ivo fitobiana traboina:
Inona no atao hoe salotr'ain'i Judnak  ary inona no andraikitry ny vohikala Facebook eo amin'ny famokarana io salotr'aina io?
Ny salotr'aina “Jud-Nak” dia noforonona antoko kely iray avy any ivelany teto amin'ny vohikala Facebook ny Alatsinainy 17 Oktobra 2011. Ny Talata izahay nahita namana tompona orinasa mpanokatra fitaovana vita amin'ny akora amin'ny fomba natoraly, fitaovana afaka anamboarana salotr'aina ho antsika. Ny Alakamisy, izahay dia nahazo fanampiana avy amin'ny sampana mpandalina momba ny maritrano, tao amin'ny anjerimanontolon'i Chulalongkorn, teo amin'ny famorona ny sarin'ilay salotr'aina. Ary anio Zoma, dia vita avokoa ireo salotr'aina voalohany miisa 20,000 ho an'ireo mpamory fiaramanidina. Ny asa rehetra dia nataon'ny olona maro tsy nifankafantatra akory, olona izay hitanay tamin'izany fotoana izany nanolotra fanampiana ara-bola sy fanampiasa teo amin'ny asa. Koa satria manampy ny ankamaroan'ny mponina izay mijaly noho ny krizy naterak'io tondra-drano lehibe indrindra io tao anatin'ny 50 taona ilay tetikasa, dia mikasa ny hanamboatra maromaro amin'ireo salotr'aina ireo izahay ary manantena izahay fa afaka hizara azy ireo ho an'ireo izay tena mila izany ao anatin'ny fotoana haingana indrindra
Fitaovana azo itokisana hatramin'izao ilay hashtag #thaiflood  eo amin'ny fanaovana tatitra mikasika ny tondra-drano:
@TAN_Network : Mampitandrina amin'ny fisotroana zava-pisotro mangatsiaka mandritry ny fotoanan'ny tondra-drano ny sampana miandraikitra ny fahasalaman'ny sarambabembahoaka. Voaporofo avokoa fa ahitana mikroba ireo ranomandry sy zava-pisotro mangatsiaka.
@MCOT_Eng : ‘Nanjavona’ avokoa ny atsasaky ny taxis ao Bangkok, 60.000 ao anatin'ny 100.000 fotsiny no miasa vokatry ny tondra-drano; maro ireo toby mpamatsy solika LPG sy NGV no nikatona
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2011/11/17/25260/
 nahatsiravina : https://globalvoicesonline.org/2011/10/18/thailand-flood-maps-and-disaster-monitoring-tools/
 Nilaza : http://thailand.prd.go.th/view_inside.php?id=5976
 hifindra toerana : http://www.bangkokgis.com/flood/index.php?option=com_content&view=category&id=34&Itemid=90
 Suthichai Yoon: http://suthichaiyoon.blogspot.com/2011/11/pray-let-water-levels-subside.html
 The Thailand Life: http://thethailandlife.com/bangkok-floods-ratchada-road
 Ladprao 64: http://jcwalsh.wordpress.com/2011/11/08/flood-little-change-tuesday/